OED COVID-19 | Qaamuuska Erayada
Awoodida inaad shaqeyso: waxay ka dhigan tahay inaad jidh iyo mashkixiyan shaqeyn karto.
Si firfircoon shaqo u raadinaaya: Waxaad xariir toos ah la sameysay ugu yaraan labo shirkadiid inta lagu jiray asbuuca ama waxaad dhameysay ugu yaraan saddex shaqo oo ah hawlo aad shaqo ku raadsanayso inta lagu jiray asbuuca. Tusaalayaasha hawlaha muujinaaya inaad raadinayso shaqo waxaa kamid ah raadinta ogeysiisyada shaqada, isticmaalida aaladaha oonleenka ah ee laga raadsado shaqo, ka qaybgalka xirfadaha shaqada, ama qaadasho fasalo kor u siiqaadaya xirfadahaaga wareysiga.
Xukunka: Kani waa nidaam dib eegid oo dheeraad ah oo looga baahan yahay kiisaska qaar si loo go'aamiyo in qofku u qalmo gunnooyinka. Marka OED ay oggaato arrimaha su'aal gelinaaya in qofku helo gunnooyin iyo inkale, sharci ahaan waxaa nalooga baahan yahay inaan fiirino. Inkastoo ciladaha qaar badan lagu xalin karo su'aalo dabagal oo degdega ah, hadana marmar badan waxay u baahan yihiin dib u eegid qoto dheer ayadoo loo maraayo nidaamka xukunka. Macluumaad dheeraad ah ka baro unemployment.oregon.gov/workers/adjudication.
ARP: The American Rescue Plan Act (ARP) waa xirmo gunno oo federaalku bixiyo siina balaariya qaar kamid ah barnaamijyada gunnooyinka Sii socda ee la bixiyo Maarso 14, 2021, illaa Sembeembar 4, 2021. ARP wuxuu sii kordhiyaa gunnooyinka barnaamijyada Magdhowga Shaqo la'aanta Degdega ag ee Aafada (PEUC), Kaalmada Shaqo la'aanta Aafada (PUA), and Federal Pandemic Unemployment Compensation (FPUC) illaa Semteembar 4, 2021.
Diyaar u ah Shaqo: Waxaad diyaar u tahay inaad shaqeyso bilaa xadidaad kaa hor istaagi lahaa inaad aqbasho shaqo (tusaale ahaan: mushkilad gaadiid, xanuun, talaalada, ama haddii aad tahay bilaa qoyska/daryeelka ilmaha).
Asalka sanadka: Asalkaaga sanadka waxaa weeye afarta billood ee koowaad ee shanta bilood ee lasoo dhaafay ee ka horeeyay todobaadka aad cabashada soo gudbisay.
Hadii aad dalabkaaga hore xaraysay Janaayo, Febaraayo, ama Maarso 2021, asalka sanadkaaga wuxuu noqonayaa Oktoobar 1, 2019 ilaa Sebtember 30, 2020.
Hadii aad dalabkaaga hore xaraysay Abriil, Maajo, ama juun 2021, asalka sanadkaaga wuxuu noqonayaa Janaayo 1, 2020 ilaa Diseember 31, 2020.
Hadii aad dalabkaaga hore xaraysay Luulyo, Agoosto, ama Sebteember 2021, asalka sanadkaaga wuxuu noqonayaa Abriil 1, 2020 ilaa Maarso 31, 2021.
Hadii aad dalabkaaga hore xaraysay Oktoobar, Noofember, ama Diseember 2021, asalka sanadkaaga wuxuu noqonayaa Luulyo 1, 2020 ilaa Juun 30, 2021.
CAA: Xeerka Kaalmada Joogtada ah (The Continued Assistance Act, CAA) waa xirmo guno oo federaalku bixiyay bishii Diseembar 2020 oo bixiyay gunnoouyinka Kaalmada Shaqo la'aanta Aafada (PUA) 11 asbuuc oo dheeraad ah, iyo Federaalka ee Shaqo la'aanta Xiliga Aafada (FPUC) 11 asbuuc oo dheeraad ah, wuxuuna u baahan yahay isbadelo dheeraad ah oo ku saabsan barnaamijyada gunnooyinka federaalka. CAA waxay sidoo kale bandhigtay barnaamijka gunnada ee Mixed Earner Unemployment Compensation (MEUC), oo loogu talagalay ardayda kujirta waxbarashada isku dhafka ah, ama dadka helay labada mushaar W-2 iyo dakhliga iskaa wax u qabsiga.
CARES Act: CARES Act (Sharciga CARES) waa xirmo gunnooyin federaal ah, oo la saxiixay Maarso 27, 2020. Waxay dadka badan u sahashay inay helaan gunnooyinka shaqo la'aanta marka loo eego tirada dadkii horey u heli jiray, gaar ahaan dadka ay uu saameeyay COVID-19. Sharcigaan wuxuu abuuray Kaalmada Shaqo la'aanta Aafada, Pandemic Unemployment Assistance (PUA), Federal Pandemic Unemployment Compensation (FPUC), iyo Magdhowga Shaqo la'aanta Degdega ag ee Aafada (Pandemic Emergency Unemployment Compensation, PEUC).
Gunnooyinka la balaariyay, gunnooyinka aadka loo balaariyay: Extended Benefits (EB, Gunnooyinka la Balaariyay) waa barnaamij balaariya gunnooyinka Caymiska Shaqo la'aanta (Unemployment Insurance, UI) ee joogtada ah marka gobalka ay kajirto shaqo la'aan baahsan. Qiimeynta shaqo la'aanta waxaa dib u eegid ku sameeya federaalka saddexdii billoodba mar si loo go'aamiyo in gobalku aadaayo heerkaan balaaran. Marka qiimeyntaasu tahay 8% ama kasii badan tahay, waxaan kujirnaa HEB, dhanka kalena waxaa la bixiyaa illaa 20 asbuuc oo dheeraad ah gunnooyin ah. Haddii qiimeyntu ka hooseyso 8% laakiin ka badan tahay 6.5% waxaan kujirtaa HEB, taas oo bixinaysa illaa 13 asbuuc oo dheeraad ah oo ah gunnooyin.
Dalabka Markaad gunnooyinka isticmaasho: Dalabkaagu wuxuu noqonayaa mid ku salaysan gunnooyin isticmaalid marka haraadigaagu gaaro $0 aysana barnaamijkaas gunnnooyinka kuugu harin wax maalgelin ah.
Dalabka Dhacay: Codsiyada caymiska shaqo la'aanta ee joogtada ah (UI) waxay dhacaan kadib 52 toddobaad. Taasi waxay ka dhigan tahay inaadan dalban karin toddobaadyo dheeri ah oo deeqaha ah kadib marka codsigaaga dhammaado xitaa haddii ay koontadaada ku jiraan haraa wanaagsan. Waxaad u baahnaan doontaa inaad soo gudbiso dalab cusub. Macluumaad dheeraad ah ka baro unemployment.oregon.gov/expiredclaims.
FPUC: Gunada Federaalka ee Shaqo la'aanta Xiliga Aafada (FPUC). Qof walba oo helaaya gunnooyinka shaqo la'aanta wuxuu helay $600 oo dheeraad ah asbuuc walba laga bilaabo Maarso 29, 2020 illaa Luuliyo 25, 2020 ayadoo loo maraayo CARES Act. Continued Assistance Act (CAA) and American Rescue Plan (ARP) waxay siiwadaan gunnooyinka FPUC oo ah $300 asbuuciiba laga bib
Khiyaanada: Khiyaanada caymiska shaqo la'aanta wuxuu yimaadaa marka qof uu bixiyo macluumaad qaldan ama qariyo xaqiiqooyinka ayadoo ujeedadu tahay sidii uu ku heli lahaa gunnooyin. Haddii aad qariso ama aad usoo gudbiso macluumaad qaldan si ula kac ah, taasi waa khiyaano. KHIYAANADU WAA DEMBI waxayna sababi kartaa ganaax gaaraya illaa oo ay kujirto dacwad ciqaabeed. Macluumaad dheeraad ah ka baro unemployment.oregon.gov/idtheft-and-ui-fraud.
Dakhliga guud: Kuwaan waa lacagta aad hesho kahor intaadan ka jarin kharaashkab kugu baxa, canshuurta, ama lacago kasta oo kale oo lagaa jaray. Dakhliga guud waa inuu ka badan yahay lacagta faa'idada ah.
Shaqaalaha ku shaqeeya labada qaab oonleenka iyo sida tooska ah: Padka hela labada mushaar W-2 iyo dakhliga isa shaqaaleysiinta waxaa loo shaqaan shaqaalaha labada qaab ku shaqeeya. Si aad u barato macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan gunnooyinka shaqaalaha labada qaab ku shaqeeya fiiri Su'aalaha Badanaa La iswaydiiyo ee MEUC.
Aqoonsiga xatooyada: Tuugadu waxay ka faa'idaysanayaan aafada korona fayraska si ay usoo gudbiyaan dalabyada gunnooyinka shaqo la'aanta ayagoo isticmaalaya magacyo iyo macluumaad shaqsiyadeed oo ay si sharci daro ah usoo gateen ama oga soo xadeen kaydka xog oo oonleen ah. Kani waxaa nooc kamid ah aqoonsiga xatooyada. Dadka reer Oregon waxay khiyaanada ka oggaadaan marka ay ogeysiis ka helaan OED ama shirkadaada ku saabsan inay soo gudbiyeen codsiga gunnooyinka. Haddii arrintaan kugu dhacdo, waxay ka dhigan tahy in qof uu si khaldan u isticmaalaayo macluumaadkaaga shaqsiga ah, oo ay badanaa kujiraan labadaba lambarkaaga Social Security iyo taariikhda aad dhalatay. Waa muhiim inaad si degdeg ah oga falceliso. Macluumaad dheeraad ah ka baro unemployment.oregon.gov/idtheft-and-ui-fraud.
Caddeynta aqoonsiga: Si aan oga hortagno tuugada inay geystaan xarootada shaqo la'aanta, waxaan aad u adkeynay nidaamkeena amniga iyo xaqiijinta aqoonsiga. Kahor inta aanan kula wadaagin macluumaadka ku saabsan dalabkaaga, haddii aad tikidh kusoo gudbisay nidaamkeena Nala soo xariir (Contact Us), waxaan u baahanahay inaan xaqiijiyo inaad adiga tahay, uusana ahayn qof adiga iska kaa dhigaaya. Waxaan sidoo kale iskaashi la leenahay ID me, oo ah shirkad ku takhasustay ilaalinta aqoonsiga. Haddii aad iimeel ka hesho ID me waainaad buuxiso nidaamka xaqiijinta si aad usii hesho gunnooyinka. Macluumaad dheeraad ah ka baro unemployment.oregon.gov/idtheft-and-ui-fraud.
iMatchSkills: Tani waa aalad oonleen ah oo ay leeyihiin Waaxda Shaqaaleynta ah kana caawisa dadka shaqada ku habboon. Waxay isticmaalaysaa xirfadahaaga iyo taariikhahaaga shaqo si ay kuugu raadiso shaqa suurtagal ah. Marba marka aad macluumaad badan sii geliso barta, waxaa fududaanaya sida iMatchSkills kuu caawin karo. Iska diiwaangeli imatchskills.org.
Dalabka hore: Si aad u oggaato inaad u qalanto gunnooyinka shaqo la'aanta, waa inaad buuxiso foomka. Kani waxaa loo yaqaan buuxinta dalabka koowaad. Keliya waxaad buuxinaysaa dalabka koowaad hal mar sanad gunnooyinkiiba.
LWA: Barnaamijka Kaalmada Mushahar La Waayida (LWA, Lost Wages Assistance )waxaa barnaamij xaalad degdeg ah ahna kumeel gaar oo siiya $300 oo dheeraad ah todobaadkii dadka shaqada ku waayay xanuunka safmarka COVID-19 owgiis oo qaata gunada bilaa shaqada. Gunnooyinka LWA waxaa la heli karay Luulyo 26, 2020 illaa Semteembar 5, 2020.
MEUC: Mixed Earner Unemployment Compensation (MEUC) waa barnaamij cusub oo ay abuurtay Xeerka Kaalmada Joogtada ah (CAA). Waxay "shaqaalaha labada qaab u shaqeeya" siisaa gunno $100 ah oo dheeraad ah asbuuc walba. "Shaqaalaha labada qaab u shaqeeya" waa qof hela dakhliga W-2 IYO kan isa shaqaaleysiinta. Si aad macluumaad badan u oggaato, booqo employment.oregon.gov/ocs kadibna ku dhufo batoonka “Mixed Earner Unemployment (MEUC)”.
Lacagta faa'idada ah: Lacagtaada faa'idada ah waa wadarta guud ee aad shaqeysay oo laga jaray kharashaadka kugu baxay. Lacagta faa'idada ah. waa inay ka yartahay wadarta guud.
OCS: Kani waa Nidaam Cabashada Oonleen ahaan Loogu soo gudbiyo oo ay leedahay Waaxda Shaqaaleysiinta (OCS,Employment Department’s Online Claim System) oo laga heli karto barta Employment.Oregon.gov/ocs. Waxaad OCS u isticmaali kartaa:
Inaad kusoo gudbiso dalab gunnooyinka asbuuca
Inaad ku raadiso xaalada dalabkaaga iyo warbixinada asbuuclaha ah
Inaad dib ugu billoowdo dalabkaaga
Inaad kusoo gudbiso dalab cusub
Inaad bedesho ciwaankaaga
Inaad ka codsato lacag dhigista elektarooniga
Inaad badesho/cusbooneysiiso biinkaaga
Inaad lacag ku bixiso
Inaad ka fiiriso dookhyada gunnooyinka lacag bixinta
Inaad ka hesho foomamkaada canshuurta ee 1099G
OED: Waaxda Shaqaaleynta Oregon (OED) waa wakaalada shaqada ee gobalka. Waxaan dhiirigelinaa shaqaaleysiinta dadka reer Oregon ayadoo loo maraayo kor u qaadida isku dhafnaanta dadka, xirfadlayaal kaladuwan, iyo bixinta taageero inta lagu jiro shaqo la'aanta. Macluumaad dheeraad ah ka oggoow oregon.gov/employ/Agency/Pages/About-Us.aspx.
Lacag bixinta dheeraadka ah: Lacag bixinta dheeraadka ahwaxay timaadaa marka lagu siiyo gunnooyin aadan u qalmin. Qaar kamid ah lacag bixinada dheeraadka ah waxay yimaadaan marka dadku nasiiyaan macluumaada qaldan ama mid qay qayb dhiman tahay. Qaar kale waxaa sababa qalad ay sameyso hay'adu, qaar kalena waxaa sababi kara marka go'aan aan gaarnay la badelo racfaan kadib markaan helno macluumaad cusub.
Marka timaado lacag bixin dheeraad ah, waxaan sharci ahaan xaq u leenahay inaad iskudayno inaan dib u helno lacagta. Haddii aadan sabab u ahayn lacag bixinta dheeraadka ah, waxaan caadiyan 'dejinaa' deyntaas anagoo ka goynayna cadadka lacagta aad mustaqbalka ku helayso gunnooyinka aad u qalanto. Sababo la xariira aafada, waxaan si wayn u dhimaynaa lacagta aruurinta aan sameyno ee ku saabsan lacagtab dheeraadka ah ee horey laguu siiyay. Maraykanka Waaxda Shaqada waxay hadda noo ogoshahay inaan dhaafno qayb kamid ah lacag bixinta dheeraadka ah haddii lacag bixinta dheeraadka ah aysan ahayn qalad adigu aad gashay dib u bixintuna ay kugu tahay arrin adag oo macquul ah.
PEUC: Magdhowga Shaqo la'aanta Degdega ag ee Aafada (Pandemic Emergency Unemployment Compensation, PEUC) waa barnaamij lagu balaariyo gunnada loogu talagalay dadka ay ka dhammaateen gunnooyinka caymiska shaqo la'aanta ee joogtada ah (UI). Waxaa markii hore abuuray CARES Act. American Rescue Plan (ARP) wuxuu qofka u oggolaanayaa inuu guud ahaan helo 53 asbuuc oo ah gunnooyinka PEUC ama illaa dhammaadka asbuuca Sembeembar 4, 2021.
PPP: Paycheck Protection Program (PPP) waa amaah federaal oo loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo ganacsiyada yaryar si ay u bixiyaan mushaarka shaqaalahooda. Dadka lacagta amaahanaaya waxay u qalmi karaan in laga cafiyo amaahda PPP. Akhri Su'aalaheena Inta badan la weydiiyo ee PPP si aad macluumaad dheeraad ah u barato.
Caddeynta Shaqada (POE, Proof of employment): Si aad ugu qalanto PUA, Waaxda Shaqada Maraykanka waxay kaa dooneysaa inaad caddeyso shaqada. Isticmaal aaladaan cajiibka ah si aad u ogaado noocyada dukumiintiyada ay tahay inaad soo gudbiso.
PUA: Kaalmada Shaqo la'aanta Aafada (PUA) waa barnaamij federaal oo ah gunnooyinka shaqo la'aanta ee loo abuuray in l;aaga jawaabo aafa COVID-19. Waxaa loogu talagalay dadka ayagu shaqeysa, shaqaalaha heshiiska kujira, shaqaalaha kale ee u qalma gunnooyinka shaqo la'aanta ee joogtada ah. Waxaad heli kartaa 79 asbuuc oo ah PUA illaa Semteembar 4, 2021.
Damaaanad macquul ah: Waxaa loogu talagalay, macalimiinta, waxaad u qalmi kartaa inaad hesho gunnooyin inta lagu jiro iskuulka haddii aadan lagu siin "damaanad macquul ah" oo ku aadan inaad dib usoo laabaneyso. Guud ahaan, dammaanad qaad macquul ah waxay ka dhigan tahay inaad heysato dalab shaqo oo isku mid ah ama awood isku mid ah leh isla mushahar ah (ama 90% gudahood). Dalabku wuxuu noqon karaa qoraal, hadal, ama soojeedin. Si kastaba ha noqotee, waa inaan dib u eegno dalabkaaga si aan go'aan uga gaarno. Akhri Su'aalaheena Inta badan la weydiiyo ee ku saabsan iskuulka si aad macluumaad dheeraad ah u barato.
Dib u celinta Mushaarka: Gunnooyinka shaqaalaha ku yeeshaan dalabka ay muddo hore usoo gudbiyaan.
Iskaa-u-shaqeysiga: Haddii aad adigu shaqeysato halkii aad ka noqon lahayd shaqaale, waxaad tahay iskaa u shaqayste.
TUI: Barnaamijka Training Unemployment Insurance (TUI, Tababarka Caymiska Shaqo la'aanta) wuxuu u oggolaanayaa shaqaalaha aan shaqeyn ee u qalma inay tagaan iskuulka iyo gunnooyinka Caymiska Shaqo La'aanta Joogtada ah isku xili si ay usii wadaan inay daryeelaan qoysaska ayna u helaan shaqo. Barnaamijku ma bixinaayo lacagta tababarka, laakiin taas badelkaas wuxuu meesha ka saaraa shuruudaha baarutaanka shaqada ee dalabkaaga asbuuclaha ah marka aad iskuulka si buuxa u xaadirto. Macluumaad badan ka baro oregon.gov/employ/Unemployment/Pages/TUI.aspx
UI: Gunnooyinka Unemployment Insurance (UI) wuxuu daboolaa qayb kamid ah dakhligaaga aad waysay markaad shaqo la'aan noqotay. Ma ahan caawimaad dadwayne. Shirkaduhu waxay maalgeliyaan barnaamijka UI. Canshuurta UI lagama jaro jeega mushaarka shaqaalaha.
Shaqo la'aanta: Caadiyan, waxaa laguu tixgelinayaa inaad tahay shaqo la'aan asbuuc kasta oo aad shaqeyso wax kayar 40 saacadood aadna hesho muashaar kayar cadadka gunnooyinkaaga asbuuclaha ah (WBA). Hase yeeshee, sharciyada cusub ee 2020 iyo 2021 waxay si kumeel gaar ah meesha oga saareen marxalada keeneysa inaadan heli cadad lacah oo ka badan WBA kaaga iyo in laguu arko "shaqo la'aan", asbiic kasta oo aadan qaban wax shaqo ah ama asbuuc kasta oo aadan si buuxda u shaqeyn laga bilaabo Sebeteembar 6, 2020 illaa Janaayo, 1, 2022. Macluumaad badan ka baro shaqadeena Intaad sheeganeyso Su'aalaha inta badan la iswaydiiyo.
U.S. Bank ReliaCard: Waaxda Shaqaaleynta waxay gunnooyinka ku bixisaa midkood qaab elektaroonig ah ama kaarka amaahda ee U.S Bank ReliaCard® Visa® ama lacag dhigasho toos ah. Haddii aadan codsato lacag dhigasho toos ah, waxaa laguu soo diro doonaa ReliaCard.
Asbuuca sugitaanka: Asbuucasugitaanka waa asbuuca koowaaad ee aad soo gudbiso dalabkaaga aadna kasoo baxdo dhammaan shuruudaha. Kahor inta aadan bilaabin helida gunnooyinkaaga, sharciga oregon wuxuu oggol yahay hal asbuuc oo sugitaan halkii qofba. Wax lacag ah laguma siinaayo asbuuca, laakiin dalbashada asbuuca ayaa muhiim ah si aad u hesho dhibco lagugu siinaayo sugitaanka asbuuca. Inta lagu jiro aafada COVID-19, waxaan dhaafaynaa asbuuca sugitaanka illaa Semteembar 4, 2021. Tani waxaa loola jeedaa qof walba oo soo gudbiya dalab cusub illaa Sebteembar 4, 2021 waxaa lasiin doonaa asbuucaan koowaad.
WBA: Your weekly benefit amount (WBA, Qadarkaaga gunnada asbuuclaha ah) waa 1.25% oo kamid ah dakhligaaga guud ee aasaasiga ah. Sida ku xusan sharciga Oregon, kama yaraan doonto ama kama badnaan doonto inta ugu badan ee aad heli karto. Tusaale ahaan, shaqaalaha hela mushaar dhan $12.50 halkii saac, oo shaqeeya 40 saacadood asbuucii sanadkii lasoo dhaafay ayaa heli doonaa $325 halkii asbuuc oo ah gunnooyinka shaqo la'aanta. Bixinta ugu yar gunnooyinka shaqo la'aanta waa $157 asbuucii. Inta ugu badan halkii asbuucba waa $673. (Dalabka hore ee cusub ee la buuxiyay 4 ta Luulyo 2021 ama kasii dambe, inta ugu yar ee la bixiyo waa $171 dhanka kale inta ugu badan waa $733.
Dalabka asbuuclaha ah: Si ay kuugu billoowdaan gunnooyinka shaqo la'aanta, waa inaad soo gudbiso dalabka asbuuclaha ah. Kani waxay ka duwan tahay dalabkii hore. Waa inaad soo gudbiso labadaba si aad u hesho lacagtaada. Dalabka asbuuclaha ah waa sida aan u oggaano cadadka lacagta aan kuusoo dirnay asbuucaas. Masoo gudbin kartid dalabka asbuuclaha ah ilaa asbuucu dhammaado. OED, asbuucu wuxuu billowdaa Axada wuxuuna dhamaadaa Sabtida. (Waxaad arki kartaa anagoo tixraacayna taariikhaha "dhammaadka asbuuca".
Si aad si joogto ah u hesho gunnooyinka, waa inaad soo gudbiso dalabka asbuuclaha ah asbuuc kasta. Soo gudbi dalabka asbuuclaha ah xataa haddii aad shaqeyso asbuucaas. Waa inaad soo sheegto saacadahaaga iyo lacagta aad hesho shaqo kasta oo aad shaqeyso.
Soo gudbi dalabkaaga asbuuclaha ah xataa haddii aadan aqoon haddii codsigaaga aan wali la ansixin. Waxay qaadan kartaa illaa labo asbuuc inaan hawlgelino codsigaaga. Hadii codsigaaga la aqbalo, waxaan kusoo diri doonaa lacagtaada dhammaan asbuucii hore ee aad u qalantay illaa iyo intaad soo gudbineyso dalabkaaga asbuuclaha ah. Lacagtaada koowaad ee lagu siinaayo waxay noqon doontaa jeeg warqad ah.
Isla Wadaagista shaqada: Barnaamijka Isla wadaagista Shaqada wuxuu shaqaalaha siiyaa daookh ay iska dhaafi karaan shaqada. Waxay kuu oggolaaneysaa inaad sii haysato shaqaale xirfad leh inta lagu jiro waqtiyada gaabiska iyadoo yareyneysa saacadaha shaqada. Shaqaalaha u qalma oo saacadooda la dhimay waxay helayaan qayb kamid ah gunnooyinka caymiska shaqo la'aanta joogtada ah (UI) si ay ugu kabaan mushaarka ay dhumiyen. Baro macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan shaqo wadaaga.
Xarunta Ilaha Shaqada (WorkSource): Xaafiiska deegaankaaga ee WorkSource, oo aad ka heli karto adeegyada shaqada iyo ilaha tababarka. Raadi xarunta deegaankaaga ee WorkSource.
WorkSource Oregon: WorkSource Oregon waxay dadka raadinaaya shaqada ku xirtaa kumanaan shaqo oo la heli karo iyo fursado tababar waxayna shirkadaha ku xirnaa shaqaalaha shaqada doonaaya. Adeegyadu waa bilaash. WorkSource Oregon waxay bixisaa adeegyadaan soosocda:
U gudbinta shaqada
Cilmi iswaydaarsiga shaqada oo ka hadlaaya maadooyinka sida isku diyaarinta wareysiga,risuumka, qoraalka, iyo aqoonta aasaasiga ah ee kumbuyuurtarka
Fursadaha waxbarashada iyo tababarka ku saabsan waxbarashada bilaashka ah
1099G: 1099G waa foomka canshuurta oo loo diro dadka hela gunnooyinka caymiska shaqo la'aanta. Waxaad isticmaalaysaa marka aad buuxinayso canshuurta dakhliga federaalka iyo kan gobalka aadna u gudbineyso Laanta Adeega Dakhliga Gudaha (IRS, Internal Revenue Service) iyo Waaxda Dakhliga Oregon. Kaaga waxaad kasoo xawilan kartaa Nidaamka Dalabka Oonleen adoo isticmaalaya employment.oregon.gov/ocs.